Neutralization nke salinity ala - akwụkwọ akụkọ "Sistemụ nduku"
Foto 1. Ngwa nke Agriful
Ekaterina Kudashkina, onye ndoro-ndoro ochichi nke sayensị ugbo
Salinization nke mmiri na ala Ndị a bụ ihe ịma aka siri ike na mmepụta ihe ọkụkụ nke oge a. Dị ka amụma FAO si kwuo, ka ọ na-erule 2050, 50% nke ala ugbo n'ụwa ga-enwe mmetụta nke salinity. Salinization nke ala bụ nchikota nke oke nnu soluble na ngwọta ala, na-eduga n'ịbelata ọmụmụ. N'ụzọ bụ isi, ọ bụ maka mmebi ala. Ọnụ ọgụgụ dị elu nke nnu nwere mmetụta na-adịghị mma na mgbọrọgwụ usoro osisi. N'ihi n'eziokwu na nrụgide osmotic dị n'èzí nke ngwọta ala na-aghọwanye elu n'ihe metụtara nrụgide osmotic dị n'ime osisi, ikike nke osisi na-etinye mmiri na nri na-edozi ahụ site n'èzí na-ebelata, ụkọ ha na-eme - ọbụna na ala nke ọma.
N'elu ala saline, nnukwu nchịkọta sodium cations na-egbochi nchịkọta nke cations ndị ọzọ, gụnyere ndị dị mkpa maka ndụ osisi, dị ka calcium na potassium. Ọnụ ọgụgụ dị elu nke Na+ na/ma ọ bụ Cl- na-egbochi photosynthesis. Salinization chloride bụ otu n'ime ihe kachasị dị ize ndụ maka osisi.
Salinity emetụta uto na mmepe nke osisi na niile nkebi, si germination na maturation, ma karịsịa ike na oké egwu n'ụzọ nke ontogeny. Nsonaazụ nke ikpughe nwere ike dị iche iche: site na mbelata nke seedlings na ọnwụ zuru oke nke osisi.
Ngwọta maka nsogbu ahụ. Enwere ike mesoo salinity site na agrotechnical na usoro ọmụmụ. Nhọrọ nke ihe ubi nke ugbo maka ntachi obi nnu bu uzo di ogologo ma di oke onu ahia, obu maka ọdịnihu, n'ihi na nsogbu nke salinity agaghị apụ n'ebe ọ bụla n'ime afọ ndị na-abịanụ. Usoro agrotechnical na-agụnye usoro nhazigharị (dịka ọmụmaatụ, ntinye nke phosphogypsum dị mkpa, ma n'ihe gbasara mmụba nke ọnụ ahịa ngwa ngwa na mmanụ na mmanụ lubricants, nzọụkwụ dị oke ọnụ) na fatịlaịza (iji akwa akwa akwa dị iche iche nke ala dị iche iche) fatịlaịza nke na-enyere aka belata salinity nke mmiri na ala, dịka ọmụmaatụ: M na-ezute na omume mmeghe nke ammonium nitrate ma ọ bụ phosphoric acid na mmiri ntapu).
Site n'ahụmahụ na nduku: Ụzọ dị mma isi mee ihe banyere salinization nke ala dị n'elu ma gbochie ọnọdụ ahụ ka njọ n'ebe ndị gbara mmiri mmiri bụ. Fertigation na ngwa nke fatịlaịza Agriful Plus. Agriful Plus bụ fatịlaịza mmiri mmiri iji kpochapụ salinity ala yana mgbọrọgwụ biostimulant dabere na acid fulvic.
Anyị ahụla nke ọma irè ọgwụ ahụ n'otu n'ime ugbo kachasị ukwuu na mpaghara Rostov.
Energia LLC bụ ụlọ ọrụ flagship nke mpaghara ahụ. Ọ na-eto ụdị ihe ọkụkụ dị iche iche, nwee nhazi nke ya na ịzụ anụmanụ. Ọbụlagodi na ọnọdụ kpọrọ nkụ nke dị n'ebe ọwụwa anyanwụ nke mpaghara Rostov, ugbo ahụ na-ebute ụzọ n'ihe gbasara mkpụrụ ọka wit oyi.
N'afọ 2020, agbakwunyere poteto Ihe mgbakwunye Mgbakwunye (pH nke nkwadebe - 4,7) kwa dobe na ọnụego 5 lita kwa hectare maka oge na-eto eto.
Foto 1. Mgbasa nke Agriful na mmiri
Mgbe ngwa mbụ na oge budding na usoro onunu ogwu nke 2,5 l / ha (etisasịwo na gbọmgbọm kwa 1000 lita mmiri ma tinye ya n'ọrụ site na dobe, foto 1), desalinization elu nke ala mere. N'ihi ya, ntụpọ nnu na mmiri ntapu na-apụ n'anya n'ime ụbọchị atọ.
A na-ahụ mmetụta ahụ ozugbo (foto 2). N'akụkụ aka ekpe, ridges dị ọcha nke ukwuu, na n'aka nri, ntụpọ nnu ka dị otu.
Foto 2. Agriful Plus na-agba mmiri na-enweghị ya (n'aka nri)
Ngwa nke abụọ na nke atọ nke ala biofeeding Agriful Plus kwa dobe bụ 1,25 l / ha n'oge oge ntolite - ifuru na mgbe okooko gachara, n'otu n'otu (foto 3).
Foto 3. Agriful Plus na-agba mmiri na-enweghị ya (n'aka nri)
Nlebanya vidiyo nke onye na-akụ ahịhịa-agronomist dị na ọwa YouTube anyị "Agroliga".
Kedu uru asọmpi nke Agriful Plus? Ọgwụ bụ 100% nri sitere na nri, ọ bụ ngwaahịa organic kpamkpam.
Nke a bụ ọkacha mmasị na fulvic acid (25%) biofeed n'ahịrị fatịlaịza anyị.
Fulvic acid mụbaa ọrụ nke microflora ndu ma mepụta usoro mgbọrọgwụ. Ha na-agbaze ngwa ngwa na mmiri ala ma nwee ike ịmalite site na mono- na divalent cations (dịka ọmụmaatụ, yana K).+, Na+, NH4+, Ca2+, mg2+) Nnụ na-agbaze mmiri, nke na-ebelata salinity nke ala, na ihe ọkụkụ na-enwetakwa nri nke ọma. Otú ọ dị, na gburugburu alkaline nke ukwuu (pH> 10), akụkụ nke fulvic acid nwere ike ịmalite site na calcium na barium ion. Na trivalent cations (Fe3+ na Al3+) fulvic acids nwere ike ịmalite ma ọ bụ mepụta ogige mgbagwoju anya na-edozi mmiri, ma ahụtụbeghị m ala ma ọ bụ mmiri pH na omume. A hụrụ pH mmiri kachasị elu na mpaghara Rostov - 8,5.
Agriful Plus tinyekwara betains. Ha na-enyere aka ịhazi nrụgide osmotic ma melite nnweta nri. Na mgbakwunye, betaines na-eme ka usoro mgbọrọgwụ nwee ike ịmị mmiri, mee ka ihe ọkụkụ na-eguzogide oke okpomọkụ na nke dị ala, na-akpali njikọ nke chlorophyll.
Polysaccharides bụ isi iyi nke ume, na-amụba ogo penetration nke nri na mmiri n'ime osisi mkpụrụ ndụ ma melite àgwà tubers na mgbọrọgwụ.
Ọnụ, polysaccharides, mgbagwoju nke vitamin na ụba ọdịnaya nke organic bekee (45%). Ihe mgbakwunye Mgbakwunye regenerate mmepe nke ala microflora ma weghachi ọmụmụ. Site na nlebanya, ala ahụ ghọrọ nke na-atọ ụtọ.
Usoro akwadoro nke Agriful Plus maka oge na-eto eto bụ 5-10 l / ha, nke na-akwụ ụgwọ na-arụ ọrụ nke ọma. Fertition na iji Agriful Plus yana atụmatụ foliar nri nri na poteto mere ka o kwe omume ịchekwa 4,7 t/ha ọzọ n'ihe metụtara nhọrọ akụ na ụba. Mkpụrụ nke poteto BP-808 n'ime ụgbọ mmiri nke pilot bụ 42,5 t / ha, na uru net bụ 42 rubles / ha (ewezuga ego).
Agriful Plus nwekwara ike tinye ya n'okpuru ogbugba mmiri n'elu: anyị nwere ahụmahụ nke itinye ya na usoro nke 2,5 l / ha na nnukwu dobe nozzles, na-arụ ọrụ mmiri mmiri na-eru 300 l / ha, mgbe nke a gasịrị, agbanyere igwe mmiri. . Ya mere, otu ụbọchị gafere ruo mgbe ụgbọ ala ahụ rutere na njedebe nke gburugburu, ọ dịghịkwa ọkụ ọkụ.
N'ịchịkọta, ọ ga-amasị m ịdọrọ uche onye na-agụ ya ọzọ na isi ihe abụọ dị mkpa.
Nkwadebe Agritecno, gụnyere Agriful Plus, nwere asambodo mba ụwa Ecocert, OMRI, nke na-akwado ohere nke iji ngwaahịa ndị a. oru ugbo na gburugburu ebe obibi.
Ngwa nke Agriful Plus na mmiri ntapu anaghị edochi mweghachi ala. Nke a bụ ụzọ dị mma isi mee ka salinity ala ghara ịdị njọ n'oge oge ntoju. Nsogbu nke salinization nke ala chọrọ ọrụ a haziri ahazi, jikọtara ya na nhazi.
N'isiokwu a, anyị gbalịrị ịkọwa usoro omume nke ọgwụ Agriful Plus, n'ihi na ọ bụ naanị inwe ozi dabeere na sayensị na arụpụtaghị ihe, ị nwere ike ịme nhọrọ ziri ezi maka ngwaahịa ụfọdụ.
Anyị na-egosipụta ekele anyị maka ndị ọrụ nke ugbo nke onye isi Vladimir Vasilievich Bukhtiyarov nọchitere anya maka ụzọ ọhụrụ maka teknụzụ ugbo na mmekọrịta dị irè.
Enwere ike ịchọta akụkọ ndị ọzọ gbasara ahụmịhe nke iji Agritecno nkwadebe na webụsaịtị www.agroliga.ru na ngalaba Media.
Tags: "Agroliga"Ihe mgbakwunye Mgbakwunyesalinization nke mmiri na ala
A tụlere mmejuputa usoro ozi maka traceability nke pesticides na agrochemicals na ngosi "Golden Autumn-2021"
JSC "Belaruskali" na-akwụsị inye fatịlaịza